FAHATRARANA BASY TSY ARA-DALANA : Miisa roa ireo olona voasambotra tao Ambondromamy
Tsy misy fitsaharana intsony ny fanatanterahan’ny mpitandro filaminana ny savahao ireo izay mbola minia mampiasa basy tsy ara-dalàna ho fisorohana ny tsy fandriam-pahalemana. 16 août 2019
Hentitra dia hentitra izy ireo ary mangataka fiaraha-miasa amin’olon-tsotra hatrany mba hanome vaovao raha sendra ka mahita tranga mampiahiahy, eny fa na dia trangam-piarahamonina hafa aza no mety hiseho eny amin’ny manodidina. Ny 10 Aogositra 2019 lasa teo, tamin’ny 9 ora alina tao Ambondromamy Distrikan’ Ambato boeny, rehefa nanao fisafoana ny zandary avy ao amin’ny Tobim-paritra Ambondromamy dia nahatsikaritra olona roa nitondrana entana mampiahiahy.
Rehefa natao tokoa ny fisavana ny roa tonta dia nahitana Basim-borona “calibre 12”. Olona 2 no notanana hanaovana fanadiadiana taorian’izay. Hiakatra fampanoavana kosa ny raharaha aorian’ny famotorana lalina. Fanatsarana ny fandriam-pahalemana manerana ny Nosy no antony goavana mahatonga ny fisavana ny mponina izay minia mampiasa izany amin’ny tsy ara-drariny hoy hatrany ny mpitandro filaminana misahana izany.